Filimooyinka, taxane ... Maxay tahay Netflix cusub bisha Maarso? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Movies, series ... Maxay tahay Netflix cusub bisha Maarso?
Filimooyinka, taxane ... Maxay tahay Netflix cusub bisha Maarso?
TELES RELAY 26 February 2019
Taxanaha Netflix ee ku yaalla March 2019
• Flash - 4 Xilliga: 1er Maarso
• Jasiiradda Larva - 2 Xilliga: 1er Maarso
• Cannon Busters - 1 Xilliga: 1er Maarso
• Magaalda Qarsoon - 2 Xilliga: 6 Maarso
• Order The - 1 Xilliga: 7 Maarso
• Shadow Khumalo - 1 Xilliga: 8 Maarso
• Immortals (Vampires Istanbul) - 1 Xilliga: 8 Maarso
• Ka dib Nolosha - 1 Xilliga: 8 Maarso
Kadib markii uu lumiyay xaaskiisa, saxafigu wuxuu noqonayaa mid gebi ahaanba aan loo dulqaadan Karin oo dhammaan dadka isku dayaya in uu ka caawiyo inuu ku sii socdo murugadiisa.
• Robozuna - 2 Xilliga: 15 Maarso
• Queer Eye - 3 Xilliga: 15 Maarso
Netflix ayaa dib u soo nooleeyay muuqaal TV Queer Eye isaga oo awood u siinaya shan nin, gay, kuwaas oo ay tahay in ay lixaad siiyaan kalsooni.
• Jacayl, Dhimasho + Dhibaatooyin - 1 Xilliga: 15 Maarso
Taxanaha Netflix waxaa ka mid ah 18 oo ku saabsan 10 daqiiqo. Inkasta oo ay kuxirantahay, sheekadu waxay u muuqataa mid aan cad ahayn, marka laga reebo in ay dhagaystayaashu u riixdo qariidada. Sida fiidiyowga uu leeyahay, " tareenka soo socda ayaa loogu talagalay dadka dhagaystayaasha ah ".
• Daaciso Charlie - 1 Xilliga: 15 Maarso
• Horumarinta Hagaajinta - 5 Xilliga, Qaybta 2: 15 Maarso
• Luther - 5 Xilliga: 15 Maarso
taxanaha ah British on Netflix muujineysaa ku adventures of isbatoore bilays ah, ayaa ciyaaray by Idris Elba, oo waa shareerad ka dhanka ah madaxda jinniyada uu sameeyo shaqadiisa.
• Scorpion - 4 Xilliga: 15 Maarso
• Taariikhda dembiga: Colosio : 22 Maarso
Sida ku cad Netflix, Taariikhda dembiga: Colosio waa qaybta koowaad ee taxane ah oo diiradda saaraya dambiyada aan la xallin ee ka jira Latin America. Xaaladda Colosio ayaa sheekada sheekada musharaxa ka ah doorashadii Mexico, waxay ku dishay in ka badan sanadihii 20.
• Waxyaabaha ugu quruxda badan - 1 xilli: 22 Maarso
• ingriiska - 1 Xilliga: 29 Maarso
Si aad ah loo filayay on Netflix, ingriiska waa taxanaha saddexaad ee faransiiska ah ee barxada socodkaaprès Marseilles iyo Qorshaha Wadnaha. ingriiska wuxuu muujinayaa Faransiis ah feker ahaan taas oo uu jiro arji ah inuu heli karo ninkiisa. Hase yeeshee waxaa jira daruuri.
Haddii aadan aamminsanayn teknolojigeena, ogow in jacaylku uusan ahayn mid ammaan ah 100%, sayniska inkastoo.
Osmosis, March 29, oo kaliya on Netflix. pic.twitter.com/qFu0XkEubv
- Netflix France (@NetflixFR) February 14 2019
• Santa Clara Cuntada - 3 Xilliga: 29 Maarso
Waxaa laga helayaa Netflix bil gudaheed, 3 xilli ciyaareedka Santa Clara Cuntada waxay noqon doontaa fursad ay kula kulmaan Sheila iyo Joel Hammond, oo ah lamaane heysta asal ahaan badan marka ay timaaddo cuntada ...
Fiidiyeyaasha Netflix waxay soo degeen Maarso 2019
• Saga Jurassic Park : 1er Maarso
• Wiilkii dabaysha gareeyey : 1er Maarso
Filimadu waxay soo bandhigtay dhacdooyinka dhabta ah, filimka ugu dhakhsaha badan ee laga heli karo Netflix wuxuu sheegayaa sida dhalinyaro yar oo magaciisa la yiraahdo William Kamkwamba ay tuuladeeda u kaydinayso iyadoo la dhisay dabaysha dabaysha.
• Kaliya, tilmaamaha isticmaalka : 2 Maarso
Waxaa laga heli karaa Netflix dhawr maalmood, Kaliya, tilmaamaha isticmaalka waxay u sheegeysaa waxyaabaha soo kordhay ee Alice, oo ah shakhsi cusub New Yorker oo weli ka qoomameynaya xiriirkii ugu dambeeyay. Laakiin markaa waxay la kulantaa Robin oo labadaba waxay isku dayaan inay xalliyaan xidhiidhka labada ilaa inta ay ka qayb qaadanayaan. Kabka waxaa ka mid ah joogitaanka Dakota Johnson iyo Rebel Wilson.
• Zoolander 2 : 2 Maarso
• Dareemo : 8 Maarso
Dareemo wuxuu u sheegay sheekada kabtanka markabka kalluumeysiga uu la xiriiray xaaskiisa hore, kuwaas oo weydiistay caawimo. Waxaa soo saaray Netflix, filimka muuqaalku wuxuu xaqiijinayaa joogitaanka Anne Hathaway.
• Juanita : 8 Maarso
• Adag iyo Rodeo : 8 Maarso
• Xadka Xadka : 13 Maarso
• World Jacka : 15 Maarso
Lagu soo bandhigay 2015, waa bartamihii Maarso World Jacka waxay ku socon doontaa Netflix, maalmo yar ka dib markii calaamada caanka ah. Sheekadu waxay dhacaysaa sannado 22 ka dib sheekada koowaad waxayna sheegaysaa sida xadiiqada dinosaurka mar kale furay inkastoo ay jireen dhacdooyin hore.
• Mad Max : 15 Maarso
• Ninka ugu fiican : 18 Maarso
• Dirt : 22 Maarso
• Charlie oo ku yaala dhulalka saaran : 22 Maarso
• Hotel Transylvania 2 : 26 Maarso
• Wadooyinka waaweyn : 29 Maarso
Waxaa laga heli karaa Netflix bishiiba, Wadooyinka waaweyn sheegayaa ugaarsi ugu Bonnie Parker iyo Clyde Barrow by baarayaasha iyo Frank Hamer Maney Gault labadaba, laba-hawlgalayaasha kuwaas oo isku hallaysay dareenkaaga si ay u joojiyaan caanka ah off-ka-sharciga.
Dokumentiyada Netflix ee soo degaya Maarso 2019
• Xumaan : 1er Maarso
Waxaa laga helaa 1er ee bisha ee on Netflix, Xumaan waxa uu ka hadlayaa su'aasha guul iyo guul darrida ciyaaraha isboortiga.
• Antoine Griezmann, oo ah horyaalka adduunka : 21 Maarso
• Halyeeyga jasiiradda cocaine : 29 Maarso
Sidee loo bixiyaa filimada iyo taxanaha Netflix?
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.presse-citron.net/films-series-quelles-nouveautes-netflix-en-mars/
Nin u dhashay Faransiiska oo loo xiray cunug yar yar kadib markii uu ku soo qoray Craigslist
Shaqaalaha Abaabulista Natiijooyinka Waaweyn ee Google